Njenganoma yiluphi olunye uhlobo lokugembula, ukubheja kwezemidlalo kulawulwa ngokuqinile ngumthetho. Lokhu kubalulekile kokubili eRussia nakwamanye amazwe. Endaweni ethile abaye bahoxiswa, futhi endaweni ethile umsebenzi walezo zinto unqunywe yiziphathimandla. Ngenxa yalesi sizathu, abakhiqizi abaningi nezindawo ezihlukahlukene zokugembula badonsela abadlali ezinkampanini ezisebenza empilweni yangempela. Siyabonga ngalokho ongakubona kunethiwekhi inamba enkulu yemithombo enikeza ukubheja ezemidlalo, futhi eziningi zazo zithandwa kakhulu.
Enye yalezi zincwadi ibhuki "Baltbet". Ukubuyekezwa kwabadlali ngakho, ulwazi oluvela kwisayithi esemthethweni yenkampani, kanye nokwaziswa mayelana nehhovisi kusuka kwezinye izinsiza - konke lokhu sizofaka esihlokweni sethu.
Ngokwesiko, incazelo yesayithi, ekubhekaneni nokubheja kwezemidlalo, siqala ngencazelo yenkampani ewulawulayo. Esimweni sethu, sikhuluma nge-LLC Santorin, eyaqala ukusebenza ngo-2003. Ngaso sonke isikhathi le nkampani yakwazi ukufinyelela izinga eliphakeme kakhulu lokuthandwa phakathi kwabadlali.
Esikhathini sokuthuthukiswa kwayo, "i-Baltbet" (impendulo yabadlali iqinisekisa lokhu) ikhule ibe nenethiwekhi equkethe amaphuzu angu-640 wokutholwa. Ngenxa yalokhu inkampani ikwazi ukumboza ingxenye enkulu yensimu yezwe lethu. Futhi amahhovisi omele asebenza eTajikistan, eSerbia naseBelarus.
Uma ukholwa ulwazi oluvela kusayithi, ihhovisi legatsha liseSt. Petersburg.
Kanye nakwamanye amapulatifomu okubheja, i-BC "Baltbet" (ukubuyekezwa okuzobekwa ngaphezulu) inethuba lokubheja ezigabeni ezihlukahlukene zezemidlalo. Ngokuyinhloko, inqwaba yezinhlobo zemidlalo iyatholakala lapha ngezinkulungwane zemincintiswano eziqhutshwa njalo. Ngakho-ke, ngisho nabalandeli abakhuthele kakhulu banethuba lokuthola uthando lwabo lwezemidlalo ngosizo lwehhovisi elishiwo.
Ungabona zonke izigaba lapho inkampani yamukela khona ukubheja ekhasini elisemthethweni lewebhusayithi yayo. Kunezikhombandlela ezahlukene - ngaphandle kwezemidlalo kunethuba lokubheja emiphumeleni yezombusazwe kanye nemicimbi emkhakheni wezamasiko. Indlela enjalo yendawo yonke iye yasungula ihhovisi ukuqinisekisa izithakazelo zezinga elibanzi kunazo zonke labadlali balo.
Sesivele sibike ukuthi i-BC "Baltbet", ongayibona mayelana nalesi sihloko, isebenza ensimini ye-Russian Federation. Ngakho-ke, singasho ngokuphepha ukuthi ulimi olusemthethweni lwesayithi nguRashiya, futhi imali iyisihluthulelo. Uma ngabe ufisa, umsebenzisi angashintsha kwezinye izinguqulo, kuhlanganise nama-rublebhu aseBelarusian kanye nomunye. Noma kunjalo, iqiniso lokuthi ngokuzenzakalelayo imithombo ilungiselwe abasebenzisi abakhuluma isiRussia, ayikwazi ukujabulisa kodwa okulandelayo.
Ngaphambi kokuba uqale ukwenza amabhethri, njengakwamanye amahhovisi, udinga ukuba ne-akhawunti yakho. Le nqubo ilula kakhulu futhi idinga imizuzu eminingana yesikhathi sakho. Amasimu okumele agcwaliswe nawo ajwayelekile. Lapha, idatha yomuntu siqu iyadingeka ukuze uhlelo lukwazi ukukubona esikhathini esizayo.
Futhi, ngokusho kwenqubomgomo yenkampani, udinga ukubona ukuthi ungubani ukuze ukwazi ukuthi ungumsebenzisi omdala. Ngenxa yalesi sizathu (njengokunye kuwo wonke amahhovisi) uzocelwa idatha yepasipoti. Ngaphandle kokudala i-akhawunti yomuntu siqu, awukwazi ukubheja nokuphatha imali yakho ku-"Cashier" yesistimu.
Ukubuyiswa kwe-Akhawunti nokuhoxiswa kwezimali
Ngemuva kokuthi i-akhawunti idalwe, ungaphatha ukubuyiswa kabusha nokuhoxiswa kwemali kuyo. Futhi, uma kunikezwe ukuthi "i-Baltbet" (ukubuyekezwa nakho kukhulume ngakho) ukuqhuba imisebenzi empilweni yangempela, inkampani ingayamukela izimali zombili ngokheshi futhi ngosizo lwezinhlelo zokukhokha ezithandwa kakhulu kuze kube yimanje.
Njengoba kunikezwa ukuthi ukubuyekezwa kwe-BC "Baltbet" kuthiwa yi-site yesiRussia kuphela, kuqinisekisiwe ukuthi kuyatholakala engxenyeni yaseRashiya ye-Internet Webmoney, Qiwi. Kungenzeka futhi ukugcwalisa ngosizo lwabaqhubi bezintambo Beeline kanye ne-MTS. Ngakho lokhu ngeke kube inkinga.
Ukuhoxiswa kwezimali kwenziwa ngokuvumelana nomthetho we-classical - ngemali efanayo eyafakwa ngumdlali. Kodwa lokhu akusebenzi ekugcwaliseni kabusha ngeselula.
Njengamabhonasi, ihhovisi lihlela ama-lotto ahlukahlukene. Ukuze uhlanganyele kuzo udinga ukuthenga ithikithi elikhethekile, elidayiswa kumahhovisi ehhovisi.
Njengoba umkhuba ubonisa, ukunqoba lapha ngempela. Isibonelo, ngesikhathi sokubhala lesi sihloko, umklomelo omkhulu wama-ruble wezigidi ezingu-350 wathola indoda evela eNovosibirsk. Lokhu kwenzeka ngoFebhuwari 2016. Umnqobi wakwazi ukwenza lokhu ngenxa yokuthi waqagela zonke izinombolo ezingu-6 ezakha inhlanganisela yokuwina ohlelweni.
Ama-lottery amaningi, ukuze uvivinye inhlanhla yakho, uzothola kuhlelo olufanayo "Baltloto". Ilawulwa yinkampani efanayo ephethe i-sportsbook "i-Baltbet".
Kungakhathaliseki ukuthi izincomo ezikhazimulayo inkampani engazange ziziqhenye kanjani kwi-website yayo esemthethweni, abasebenzisi namanje basho uphawu oluhle kakhulu lwekhwalithi yimuphi umkhiqizo. Ihhovisi lobubhuki, elikulo mkhakha, alihlukile. Ngakho-ke, lapho sibhala lokhu, siseshe lonke ulwazi oluphathelene ne "Baltbet".
Impendulo ngezinkokhelo yinto yokuqala esiyithole ukuyithola. Yebo, ihhovisi likhokha ngempela. Kodwa, ngezinye izikhathi, kunemibiko yokuthi inkampani ibambezela ukukhokha. Ngalokho okuxhunyiwe - akucaci, noma kunjalo, iqiniso lihlala.
Ngokuvamile, inhlangano yenkampani yashiya amazwana amaningi kakhulu. Ngakho-ke, ukubeka iziphakamiso ze "Baltbet" mayelana nehhovisi kufakazela ukuthi lapha baqhubeka bethuthukisa inkonzo: benza umklamo okhangayo kakhulu wesayithi, iKhabhinethi yomuntu elula, engeza imidlalo emisha nemicimbi yokubikezela. Inkampani ikhiqiza umkhiqizo wayo, inikeza inkonzo engcono kakhulu kubadlali. Lokhu kubonakala, ngakho-ke, ihhovisi liye lasebenza emakethe isikhathi eside kangaka.
Nakuba kunjalo, kunemibiko engalungile mayelana nenkonzo ye "Baltbet". Banikeza ubufakazi bokuthi inkampani ingakwazi ukungabonakali ukukhokha ukukhokha, ngokubhekisela ekubalweni okungalungile. Ngenxa yalokhu, umuntu ulahlekelwa ibhidi lakhe lokuwina futhi wenqaba ukuxhumana nalokhu okuqinile. Kungani kwenzeka, kunzima ukusho. Mhlawumbe, ngokubala ama-coefficients, uhlelo luhluleka, ngenxa yokuthi izimo ezinjalo ezingathandeki ziphakama.
Kodwa ngokuyinhloko isevisi inikeza abadlali ukwanda kwamanani (ukwahlulela ngezibuyekezo), okuphinde kukunikeze ithuba lokuthola ekubikezelweni okuwina ngaphezulu.
Ngaphezu kwalokho, ngencazelo ephelele kakhulu yensiza, ngingathanda ukuletha ulwazi kubantu abasebenza ngesakhiwo se-"Baltbet". Impendulo yomsebenzi ibonisa nokuthi inkampani ihlela kanjani umsebenzi wayo.
Ngakho-ke, ngaphezu kwakho konke sikwazi ukufumana imibono evela kubapharetha - abantu abahlezi ngemuva kwekhalenda ehhovisi elimele lenkampani futhi bamukela amabhethri aphilayo. Abaningi balaba basebenzi banelisekile ngemibandela yokusebenza eBaltbet. Bakhokha kahle lapha, ezimhlophe futhi ezinzile; Le nkampani inikeza ithuba lokutadisha nokuthuthukisa ngokwengcweti; Kunomshwalense womphakathi. Kodwa-ke, kwakukhona nezici ezimbi, ezikhonjisiwe kuzibuyekezo.
Enye yazo iyinkimbinkimbi yomsebenzi. Abashayeli abanjalo baphoqeleka ukuthi babhekane nabashayeli bezokugembula abangakwazi ukuziphatha ngokungafanele ngemva kokulahlekelwa okukhulu. Ngakolunye uhlangothi, ngemuva kokuwina laba bantu abanjalo babezimisele ukushiya amathiphu avulekile (ukwahlulela ngezibuyekezo).
Singaqaphela futhi uhlelo oluqinile lwezinhlawulo. Ngenxa yakhe, abanye abasebenzi bathola isigamu somholo. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuyisiyalo esenziwa kuwo wonke amalungu eqembu.
Inkampani "Baltbet" ingomunye wabaholi bemakethe yaseRussia yokubheja kwezemidlalo. Ukubheka izibuyekezo, isizathu salokhu kuyinhlangano efanele yabasebenzi, indlela efanelekile nomzamo wokunikeza ikhasimende amasevisi wezinga eliphakeme kakhulu.
Cognac "Shustov": incazelo, umlando, Ukucaciswa, ukubuyekezwa